Arday badan oo maanta u fariisatay Imtixaanka Deeqaha wax barasho ee Hormuud (Daawo Sawirada)
Tuesday August 06, 2019 - 20:55:35 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Waxaa Maanta Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya si rasmi ah uga bilowday imtixaanka qabuulka ah ee looga gudbayo Deeqaha waxbarasho ee Hormuud Telecom (Hormuud Scholarship) taasoo ay dhawaan ku dhawaaqday Shirkadda.
Imtixaanka ayaa waxaa Maanta u fariistay ku dhawaad 300 oo arday kuwaas oo diyaar u ah inay aqoontooda ugu soo gudbaan Deeqaha waxbarasho ee Hormuud Telecom (Hormuud Scholarship).
Ardaydaan waxaa laga qaadan doonaa 30-ka arday ee ugu sarreysa, kuwaas oo nasiib u yeelan doona inay helaan deeqaha Waxbarasho ee Shirkadda Isgaarsiinta Hormuud.
30-ka arday ee imtixaanka kasoo gudbo ayaa kala dooran doono Jaamacadaha ugu sareeyo dalka midda ay rabaan, sidoo kalana waxay xulan doonaan kuliyadaha ay rabaan.
Guddoomiyaha Hey’adda Hormuud Telecom Foundation Cabdullaahi Nuur Cismaan ayaa furay imtixaanka Maanta ay ardayda u fadhiisteen, wuxuuna socon doonaa muddo 2 maalmood ah.
Ardayda ka qeyb galeysa imtixaanka ayaa si weyn usoo dhaweeyey fursadda ay siisay Shirkadda Isgaarssiinta Hormuud oo ay ku tilmaameen inay mar kasta ka qeyb qaadato horumarka qeybaha kala duwan ee Bulshada Soomaaliyeed.
Maamulka Hormuud Telecom ayaa dhowaan ku dhawaaqay in ay 120 Arday sanad kasta ka bixin doonaan Lacagta jaamacadda, iyadoo ardaydaasina loo qaadan doona qeyb qeyb. waxaana ay tani noqoneysaa dafcadii ugu horreysay ee ka faa’iideysan doonta deeqdaha wax barasho ee Hormuud Telecom.